Mindaafi durgoo tokko malee hojjechaa jirra: Komaandar Huseen Shiboo - BBC News Afaan Oromoo
Mindaafi durgoo tokko malee hojjechaa jirra: Komaandar Huseen Shiboo
"Miira olaanaatu natti dhagahame. Anaafis ta'ee biyya keenyaaf badhaasni akkanaa haaraa waan ta'eef miira gaarituu natti dhagahame. Baay'een itti gammadee jira," jedhu leenjisaan atileetiksii Komaandar Huseen Shiboo.
Dhiyeenya kana Konfedereeshinii Atileetiksii Afriikaatiin leenjisaa cimaa bara 2019 ta'un kan filataman Komaandar Huseen Shiboo waa'ee badhaasichaafi qophii Olompikiif taasifamaa jiru irratti BBC waliin turtii taasisaniiru.
Godina Arsii aanaa Muunessaatti kan dhalatan Komaandar Huseen, waggoota 28 darbaniif ogummaa leenjisummaa atileetotaa keessa turan.
Komaandar Huseen sababani badhaasa Konfedereeshinii Atileetiksii Afriikaa itti argatanis biyyattin bara 2019 gama atileetiksiin sadarkaa addunyaafi Afriikaatti qabxii gaarii waan galmeessisteef akka ta'e himan.
Dorgommii qaxaamura biyyaa bara 2019 keessa Denimaarkitti taasifamen guutuu addunyaarraa sadarkaa tokkoffaa bahu ishee, dorgommii guutuu Afriikaa Morokoo magaala Raabaat adeemsifame irrattis qabxii olaanaa galmeessisuushee akkasumas qabxii shaampiyoonaa atileetiksii addunyaa Qaataar Doohaatti galmaa'e badhaafamuu isaaniitif sababa akka ta'e Komaandar Huseen Shiboo himu.
Badhaasichi isaaniifi leenjistoota atileetiksii birootiif hamilee akka kennu fi hojii isaanis kaka'umsaan akka hojjetan kan taasisu ta'uus dubbatan.
Waa’ee badhaasa Obbo Duubee maal beekna?
Waggoota 28 keessatti dorgommiiwwan hedduurratti kan hirmaatan leenjisaan kun dorgommii guutuu Afriikaa irratti si'a jaha, dorgommii olompikii shan, akkasumas dorgomiiwwan qaxxaamura biyyaafi mana keessaa 15 ol irratti hirmaataniiru.
Leenjisaa garee biyyaalessaa ta'un cinatti Komaandar Huseen atileetota kilaba Manneen Sirreessaa Federaalaa leenjisaa jiru.
Fiigichawwan gabaabaa meetira 100 hanga fageenya dheeraa maaraatoonitti akkasumas gosoota ispoortii akka darbannaafi utaalchoos leenjisaniiru.
Komaandar Huseen Shiboo yeroo garaagaraatti leenjiiwwan leenjisummaa atileetiksii kan fudhatan yemmuu ta'u isaan keessaa leenjiwwan dhaabbilee 'Olympic Solidarity' fi 'International Federations' jedhamaniin kennaman ni argamu.
Komaandar Huseen Shiboo yaada qabxiin Itoophiyaan dorgomiiwwan atileetiksii meetira 5,000 fi 10,000 irratti galmeessistu gadi bu'aa dhufeera jedhu irratti waliigalu.
Sababa isaa yeroo himanis "duraan garee biyyaalessaa jedhamee walitti qabnee waggaa dheeraaf leenjisaa turre. Amma garuu gareen biyyaalessaa bittinnaa'era. Hin jiru. Atileetotnis dhuunfaadhaan hojjechaa jiru" jedhan.
Waggoota muraasaa as leenjiin bifa dhaabbi ta'en atileetota biyyattii bakka bu'anif kennamu dhaabbachuunsaa qabxii biyyattii gadi buusuu isaa kan himan Komaandar Huseen Shiboo waldhabdeen Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi Koree Olompikii Itoophiyaa gidduu jiru atileetiksii biyyattif rakkoo isa biraa ta'u himan.
"Yoo isaan lamaan walii hin galle nurratti gama hundaanu dhiibbaa guddaa fida. Yoo hatattamaan hin furamnes gama shaakallis ta'e qabxiitin rakkoo guddaa ta'a" jedhan.
Waggaa afran har'aa yeroo Olompikii Riyoof qophaa'anis waldhabdeen hooggansa koree olompikii hojiirra jiru fi koree duula na filadhaarra ture gidduutti uummame qabxi biyyattin Olompikii Riyootti galmeessiste irratti rakkoo uumuusaa himan.
Kanaafuu rakkoon Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi Koree Olompikii Itoophiyaa gidduu jiru yoo furame malee dorgommii Olompikii ji'oota muraasa booda Jaapaanitti taasifamuf qabxii biyyattiirratti miidhaa akka qabaatu Komaandar Huseen dubbatan.
Dorgommii Olompikii Jaapaanitti adeemsifamuf kaffaltii tokko malee atileetota bilisaan leenjisaa akka jiran kan dubbatan leenjisaan kun "ijoollee nutu guddise.
Leenjisaan Itoophiyaa Chaayinoota Olompikiif qophessuufi
Akka bittinnaa'an waan hin barbaadnef osoo Federeeshiniinis ta'e Koreen Olompikii mindaas ta'e durgoo nun kaffalle uummataaf fi biyya kanaaf jennee hojjenna" jedhan.
Shaakallin Olompikiif taasifamus yeroodhaan akka eegaluf Federeeshinii Atileetiksii Itoophiyaa fi Koreen Olompikii Itoophiyaa waliigalanii hojiitti akka galamus dhaaman.
Badhaasni Obbo Duubee Jiiloon yeroo duraaf badhaafamu jedhan maali?
Imala Waggoota 25: ''Yeroo sanatti namni ni mo'atti jedhee na eege hinturre.''